Looma Ooyaan…W/Q:-Saciid Khadar C/laahi. |
Looma Ooyaan…W/Q:-Saciid Khadar C/laahi.
Mar walba waxa uu is waydiin jiray, goormaad ka bixi sidan aad ku jirto? Goormaad heli Asxaab aad la ciyaarto? Asxaab aad La joogto? Asxaab ku soo booqda oo aad booqato? Maxaa Caruurta kale kaa soocay? Waxa uu mar walba jawaab u waayi jiray, sababta ay Caruurta ay isku da’da yihiin uga carato
ee ay uga khashaafayaan? Ma Adigaa Nin Xun ah mise iyaga? Ma Nacasnimo ayaa kugu jirta? Ma dhib aad u gaysatay ayaa jirtay? Markaasuu isagu dib iskugu noqdaa oo isa sii waydiiyaa goormaad dhib gaysatay? Yaad u gaysatay? Ma mid ka mid ah mise intoodaba? Haday jirto, intay kaa yaacayaan miyaanay ka haboonayn in ay kuu sheegaan dhibta aan gaystay, raali gelin ayaan ka bixin lahaaye?
Jaamac waa Wiil aad u yar. Waxa uu jiraa Muddo Lix ilaa Todoba
Sanno ah. Hooyadii iyo Aabihiii waxay dhinteen isaga oo ay Da’diisu aad u yar tahay. Waxa Noloshiisa gacanta ku dhigtay Ayaydii Hooyo. Waa islaan Da’a ah. Waxa ay degan tahay daso yar oo ku yaal Xaafadaha Dadka ladan. Magaaladu waa Jigjiga Xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Noloshiisu waa mid aad u hoosaysa. Jaamac Ma haysto cid Ehel ah oo ka daryeesha dhinacyada, Waxbarashada, Caafimaadka, Waanada, iyo doc kastaba oo Noloshiisa ah.Maalintu siday u dhan tahay, waxa uu ku qaataa joogida Guriga dibadiisa gaar ahaan Geed aan hadhkiisu
badnayn oo ku yaal Gurigooda hortiisa. Haa, waa halkaasi meesha uu
ku qaataa. Cedceedu marka ay soo baxdo ilaa ay ka dhacayso? waxa
taa sababay markii caruurtii la da’da ahaa ee jaararkiisu diideen in uu la ciyaaro, iyaga oo ka khasaafay mar hadii uu ka soo jeedo qoys danyar ah. Marka ay sheed ka arkaan ayay ka yaacaan. Jaamac inkasta oo akhlaaqdiisu fiican tahay, yahayna Nin aad u caqli badan laakiin, kuma guulaysan in uu asxaab yeesho. Diifta, Daranyada, Aradka iyo Uskaga dushiisa ka muuqata ayay Malaha Caruurtu diiday. Meel fog ma tago, taana awoodeedba ma laha. Maba badnee, hadiiba uu u baahdo in uu cayaar sameeyo ma helo cid uu raaco ama la cayaaro. Caafimaadka ka sokaw, Caruurtu waxa ay ciyaar hawaystaan marka ay dhargaan. In Jaamac aanu Guriga agtiisa dhaafin Calooshiisa oo aan buuxin ama aanu helin Cunto ku filan
ayaa u waynayd. Marka uu ciyaarta iyo joogida dibada dhammaysto waxa uu ku noqdaa Guriga. Waa mar uu wax cunnayo iyo mar uu hurdo. Ayaydii inkasta oo ay aad u jeclayd balse, ma hayso wax ay
siiso oo Cunto ah, Dhar ah iyo waxa uu yarku u baahan yahayba. Waa iska dhul jiif oo Xannuunbaa daashaday. Waxana Dhulka la simay Baahi Aduun. Inta badan Dhulka kama kici karto. Taasina waxay Meesha ka saaartay Kaantarool ay u samayso Jaamac oo ay aad u jeclayd. Waxa kaliya oo ay u heli karaysay waxay ahayd Hambada ka soo hadha qaar ka mid ah Xaafadaha oo loo keeni jiray. Kolba into loo keeno ayay u kala qorshaysaa Seddexdooda waqti. Waa Qureecda, Qaddada iyo Cashada.
Ogaanshihii Dhimashada Waalidkii:
Waxa uu aad u naxaa marka uu Arko Caruur la mid ah oo la kool
koolinayo. Marka ay indhihiisu qabtaan caruur la mid ah oo Labisan. Kuwo xidhan Dhar Nadiif ah iyo Kabo wanaagsan. Waxa uu aad u murugoodaa marka ay dhegtiisu maqasho Hooyo Hebelaw….Hooyo Heblaayooy !!! waxa uu garaadsaday isaga oo aan Hooyo iyo Aabo midna lahayn. Intii hore ee uu yaraa ayaydii ayuu moodayay in ay Hooyo u tahay. Laakiin, markuu garaadsaday, Ayaydii Su’aalo tiro badan ayuu ku harqin jiray marka uu Xasuustaba. Aaway Hooyaday?
Aabo aaway? Halkay tageen? Miyay is raaceen? Ayaydii waxa ay mar walba ugu celcelin jirtay in ay dhinteen. Intii hore Dhimashada lafteeda ayaanu fahamsanayn. Ayeeyo, Dhimashadu waa Maxay? Waa Su’aasha ugu badan ee uu Ayaydii waydiin jiray.
Waa mid ka mid ah Sunnaha Nolosha in Qofku aad u dareemo qiimaha uu leeyahay shayga ka maqani. Sida Caafimaadka,
Laxaadka, Ubadka, Lacagta IWM.
Jaamac, helista Dad uu la Noolaado ayaa ahaa waxa ugu wayn ee ka maqnaa. Waxana rabitaankiisu ahaa, Dad uu la sheekaysto oo raaco, wehelna uga noqda Dhadhanka Qadhaadhka badan ee Noloshu
Ayaydiina waxay aad u qiiroon jirtay marka uu waydiiyo Ayeeyo Adigu miyaanad Asxaab lahayn? Sawta Xaafadahaa kale Dadku u imanayaan, inaga, Maxay inoogu iman waayeen? Waxay uga
sheekayn jirtay Nolosha Qoyskoodu siday ahaan jirtay. Inkasta oo aanay ahayn Reer Ladan. Sidii ay ku dhinteen Aabihii iyo Hooyadii. Waxay u sheegtay in Aabihii uu Geeriyooday iyada oo Hooyadii ay leedahay Uurka Wiilkii isaga ka dhalasho dambeeyay, hasa ahaatee, Nasiib Xumo ay Geeriyootay iyada oo Umul ku ah Wiilkaasi ka dambeeyay isaga, kaasi oo laftiisuna aanu ka dhimasho dambayn. Waxa kale oo ay uga sheekayn jirtay Sheekooyin ay uga dan lahayd in ay ku kobciso Maankiisa.
Waxay u marin jirtay Sheekooyin ay ugu soo xushay in uu kala dhex baxo Dhiirannaanta, Adaysiga, Sammirka iyo Geesinimada.
Jaamac in badan ayuu Ayaydii uga waramay dhibta ay ku hayaan Ardayda ay Iskuulka wada dhigtaan, gaar ahaan kuwa Fasalkiisu iyo sida aanay Maamulka Dugsiga iyo Macalimiintu waxba uga qaban. Waxaanay Ayaydii mar walba ku boorin jirtay in aanu dheg jalaq u siin “ Ayeeyo, Hadii ay Caruurtu kugu yidhaahdaan URAAYE,
waxaad ku tidhaah Idinkuba waad uraysaan” Kalmadahan ayaa ku jiray ereyadii ay Niyada ugu dhisi jirtay.
Heerkii Caqligiisa iyo Hamigiisii Shaqo tagista:
Jaamac waxa uu ahaa Wiil aad u Maskax badan oo garasho dheer. Waxa uu in badan ku hamiyay in uu shaqo tago. Laakiin, waxay
Maskaxdiisa ka baaba’day, markii dhawr cisho oo uu suuqa meeraystay uu waayay wax uu ka shaqeeyo. Waxaanu ku soo dhamaystay Orod iyo is ciil kaambi. Meeshu maraba Caruuraha ka waawayn ayaa caydhsatay. Waxa jiray kuwo aanu waxba ku samayn oo dilay, Kuwa caayay iyo kuwo eryaday intaba. Mana jirin cid ka qabata, waayo Dadku waxaabay moodayeen Ciyaalka Darbi jiifka ah. La yaab ma lahayn, waxay arkeen dharkiisa jeex jeexan ee duuga
ah. Uskaga bedelay Midabkiisa iyo kan dherkiisa. Luunka ku taaga
Haraadka ka muuqda. Raamaha Timihiisa. God godnida gaajadu ku keentay indhishiisa ee la moodo Qof Xanuun daran oo Muddo dheer hayay ka soo kacay. Iyo kabaha uu xidhnaa oo aan cagaaga waxba dhaamin.
Qofka shaqo doonka ahi kama maarmo cid garab istaagta oo ku taageerta arintaa. cid ka waayo aragsan oo uga waranta dhib iyo
dheef wixii uu kala kulmi doono shaqadaasi. Meesha uu rabo in uu ka shaqeeyo cid damiinata iyo cid uu u cawdo marka ay dhibi la soo daristo. Jaamac, taasi ma haysan.
Islaan la jaar ahayd ayaa si xun uga Murugootay dhibta Jaamac
haysata. Waxbarasho la’aantiisa, Daryeel la’aantiisa iyo sida aanu u
haysan Dad uga soo gurmada Mustaqbal la’aanta hadhaw ku dhici doonta. Mar kasta oo ay Gurigeeda dibada uga soo baxdaba, waxa ay indheheedu qabtaan Jaamac oo taagan ama kalidii ku ciyaaraya qolqolka Gurigooda. Waa Gelin hore, mid dhexe oo Cadceedu aad u
kulushahay iyo Gelin dembaba. Maalintii dambe waxa ay u timid Ayaydii si ay ugu qanciso in ILmaha yar Iskuul la geeyo. Arintan oo ay hore ugala tashatay Dumar aan badnayn oo jaarka ah. Waxaanay u keentay Lacag aan qadarkeedu badnayn oo Jaararka laga soo ururiyay. Jaamac sidii ayaa iskuulka lagu geeyay. Lacagtii yarayd ee loo keenay dhawr Buug ayaa loo siiyay. Iskuulka oo ka fogaa waa u sii lugeeyaa. Waxa uu tagaa isaga oo Kabihiisii googo’naa ay buux dhaafiyeen Boodhka iyo Ciidii taalay Dhulkii uu soo marayay. Waxaanu iskuulka soo gaadhaa isaga oo ay ka baxday Qureecdii yarayd ee uu soo cunnay. Waxa taasi kaga sii darnaa marka uu Fasalka soo galo, waxa isla oogsada Qosol iyada oo Ardaydu ku soo dhaweeyaan Jaleeco ay Naxariisi ka dheer tahay, Huruuf iyo Quudhsi. Jaamac Uraaye, Jaamac Dhareerle,Uskag wayne iyo Cali Uraaye ayaa ka mid ahaa Magacyada Ardaydu u bixisay. Waa la takooray. Waxa uu fadhiista Fasalka meesha ugu dambaysa. cid la fadhiisataa ma jirto. cid uu raacaa ma jirto. Arday kastaana waxa uu ka fikiraa Cayda iyo Takoorka soo gaadhi doona hadii uu Jaamac mar kaliya la hadlo, mar la yara fadhiisto ama yara raaco.
Dhibaatada uu Danyarnimada ku mutaystay ma yarayn. Waxay ahaayeen kuwo si aan kala go’o lahayn u weheshanayay.midiba ta kale ayay ka darnayd kana qadhaadh badnayd. Hasa ahaatee, Jaamac yare, marna iskuma mashquulin jirin. Intii dambe oo dhan ma ahayn mid ay maskaxdiisu ku mashquusho xal u helida arintaasi. Yoolkiisa Koowaad, waxa uu ahaa kaliya in uu dhammaysto Waxbarashadiisa. Taasaana ahayd Hiigsigiisa iyo Hammigiisa ugu wayn.
ILmo kulul ayaa ku soo istaagta marka uu Xasuusto sidii ay Maalin u gashay Ardayad Fasalkiisa ka mid ahi oo uu Maamulaha Iskuulku
dhalay. Kab aanu iska arkayn ayay Wajiga kaga dhufatay, markii ay aragtay isaga oo fadhiya Kursigeedii. Waxaanay ku qaylisay Ereyo ay ka mid ahaayeen “ Yaa ku yidhi Kursigayga fadhiiso Adiga oo Uraya. Bahalyahaw Doqonka ahi. Uf….Ish… noo bannee, waxyahaw dhintay ee Uskaga wayni.”
Jaamac waxa ku kulmay Qaylada iyo Kabta. Ma arkayn oo Cashar
ayuu iska qoranayay. Hadii Naxdin loo dhinto Jaamac Maalintaa ayuu u dhiman lahaa.
Jaamac Maalintaa waxa uu Fasalka yimid isaga oo Arday Cusubi uu Kursigiisii ku fadhiistay. Taasaana keentay in uu fadhiisto Kursigan ay balaayo ka raacday ee Ardayada oo yaalay meel aan ka fogayn halkii uu fadhiisan jiray. Macalinkii Xiisada ku jiray ayaa Jaamac Khaladka saaray iyadiina dib u Maslaxay. Jaamacna Dhulka ayuu fadhiistay. Waxa uu karayay in isaguna Kursigiisa ka kiciyo
Ardaygii ka fadhiistay. Waxase taa ka hor istaagay Damiirkiisa
Nool, Akhlaaqdiisa iyo Maskax badnida Eebe u dhaliyay. Maalintaasi inteeda badan Jaamac Dhulka ayuu fadhiyay. Waayo Kursi kaleba Fasalka ma oolin. waxa dhibaato aan yarayn ku ahayd Sabuurada oo uu arki waayay Ardaydii oo ka qarisay darteed.iyada oo lagu guddo jiro Xiisadii u dambaysay mar waxa si lama filaan ah Fasalka u soo galay Macalinka Fasalkiisa Masuulka ahaa (Form Master-ka) waxaanay noqotay wax uu qaadan waayo in Jaamac uu Fasalka ka waayo Naxariistii Ardaynimo. Ardaydu waxa ay Bulshada inteeda kale kaga duwan yihiin dhexdeeda waa ay isku Naxariistaan, Dadka kalena u naxariistaan. Ka aan Kursi haysan waa laga durkaa oo la is cidhiidhsadaa. Maalintaa wixii ka dambeeyay Macalinkaasi si gaar
ah ayuu u ilaalin jiray Jaamac. Inkasta oo ay ku koobnayd inta
Fasalka lagu jiro, siiba Maalmaha uu Fasalka Xiisad ku leeyahay.
Duruuftii ku Xeernayd Waxbarashadiisa
Inkasta oo dedaal ay jaarku sameeyeen Iskuulka lagu geeyay hadana ma helin wax intaa dhaafsiisan. Waxa uu ahaa, Ardaydga Fasalka ugu dambeeya. Waxa uu soo urursan jiray Xaashiyaha Ardaydu ka jeexaan Buugaagtooda. Kuwa aanay waxba ku qornayn ayuu ayaydii u keeni jiray. Ayeydiina Irbad ayay iskugu tolo jirtay. Xaashiyahaa la isku tolay ayaana Jaamac u ahaa Buugaag uu wax ku barto. Buugaagta uu Sannad walba ka helo Abaal marinaha Iskuulku marka ay dhammaadaan sida kaliya ee waxbarashadiisu ku sii socon kartaa taasi ayay ahayd.
Jaamac mar hadii aanu haysan ILays uu Habeenkii wax ku akhristo ama ku qorto, Maalintii ayuu wax akhrisan jiray. Geedka Gurigooda ku horyaal ayuu inta badan Galinka dambe Casharadiisa ku diyaarsan jiray. Waxa uu ku guulaystay Wax badan oo ay Naftiisa isku ogaayeen. Isaga iyo Naftiisa balanka u yaala ayaa ahaa in
aanay waxba u dhaxayn Waxbarashadiisa iyo Guriga. Taasi oo uu ku
guulaystay isaga oo noqday Ardayga Kaalinta koowaad ku guulaysta Imtixaan kasta oo Fasalkiisa laga qaado. Sida Hilaaca ayuu uga soo dhex booday Mudadii uu ku jiray Waxbarashadiisii Dugsigii Hoose Kii Dhexe iyo Kii Sareba.
Jaaniskii Dahabiga ahaa:
Markii uu dhammaystay Waxbarashadiisa Dugsiga sare Jaaniskiisu waxa uu siiyay in uu ka mid noqdo Afar Arday oo ahaa kuwa
iskuulkiisa ugu sareeya oo loo qaadayay Dibada. Qorshaha Dawlada ayaa sidaa ahaa. Iskuulka kasta Afarta ugu sareeya ayaa Waxbarasho bilaash ah oo dibadeed loo qaadi jiray. Waxana sidaa laga shaaciyay Xaflad balaadhan oo lagu sagootinayay Ardaydii Kaalmaha hore ku guulaysatay Dugsigooda. Waa kuwii galay Kaalmaha Koowaad, Labaad iyo Seddexaad. Waxa kale oo
Xafladaasi Abaal Marino la siinayay Ardaydii Sannadkaasi ugu
wanaagsanaa dhinaca Nadaafada, Akhlaaqda iyo Habsan la’aanta.
Maalintii balanta ee Ardaydu dhoofaysay, Xaafad kasta oo Caruurtoodu ka mid ahayd kuwa dhoofaya, waxa ka jirtay Diyaar garaw iyo Abaabul balaadhan. Waalidiinta iyo Ehelku waxa ay ahaayeen kuwo aad u faraxsan. Hadalo dhiiri galin ah iyo Hadyado kala duwan ayaa Arday kasta lagu sii sagootinayay. Baabuur ayaa lagu galbinayay. Hasa ahaatee, Ninkii Jaamac warkaasi Gurigooda kama jirin. Ma jirin Cid u Hambalyaynaysay, cid ku faraxsanayd tagidiisa iyo Hadyado loo keenay midna. Inkasta oo Jaamac
Subaxaa kalahay isla markaana dhinaca Garoonka diyaaradaha u soo
jarmaaday iyada oo Cadceedu markaa soo baxayso hadana waxa uu gaadhay iyada oo la isku haysto Diyaaradu ha duusho iyo yaanay
duulin. Intii uu Jaamac Jidka ku soo jiray ee uu soo lugaynayay ayuu habsaamay. Arday kastaa waa diyaar. Waa Labaataneeyo Arday oo iskugu jira Wiilal iyo Gabdho. Arday kastaa waxa uu ku gaashaaman yahay Shandad wayn oo ay uga buuxaan Buugaag Daabacan, Buugaag wax lagu qorto, Cadaro, Kiriimyo, Hadyado kale iyo Dhar. Mid kasta waxa hareero taagan Waalidkiisii iyo Ehelkiisii. Farxad darteed, Arday kastaa ma lahayn awood uu iskugu keeno dibnaha Afkiisa. Qosolka iyo Ducada Waalidka ayaa ahaa Buuqa uga wayn ee goobtaasi ka jiray.
Markii ay Tobankii ahayd ayuu Maamulihii isku dayay in uu Diyaaradii ku amro in ay duusho. Waxase taa si cadho leh uga jawaabay Macalinkii Fasalkiisa Maamulayay ee Form Master-ka u ahaa Jaamac. Waxa Muddo dheer socday Muranka ah Jaamac ha laga tago iyo yaan laga tagin. Murankaasi oo gaadhay heer ay isku faro saari gaadheen Maamulaha iyo Macalinkaasi. Iyada oo buuqaasi jiro waxa bidhaan ka soo muuqday Ninkii Jaamac oo soo lugaynaya. Waxa uu ku labisan yahay Surwaal iyo Shaadh jarqin ah waase
halkii awoodiisa labis ugu saraysay. Waxa uu gacanta ku sitaa Nus Rodol Timir ah oo ayaydii Sahay ahaan u soo siisay. Isaga oo la dhibaataysan Daalka ka soo gaadhay Socodkii dheeraa, ayuu Maamulihii dhirbaaxo aad u kulul ugu sii daray. Qayladii jaamac ka yeedhay waxa u adkaysan waayay Macalinkiisii oo dhirbaaxo tii la mid ah ku dhuftay Maamulihii. Waxay ku sigteen in ay gacanta iskula tagaan. Waxana goobtaasi ka duulay Diyaaradii oo ay saaran yihiin Ardaydii oo aad u faraxsan marka Jaamac laga reebo iyo Labadii kale (Maamulihii iyo Macalinkii) oo isku xanaaqsan.
La Soco Qayb kale oo Xiiso leh……………..
Waqooyiga Kuuriya Oo Koonfurta Kuuriya Ku Canaanatay Sarkaal Ay Hore…
Dablay Hubaysan Oo Nin Oday ah ku Dishay Duleedka Magaalada…
Daawo :-Banaanbax Lagu Cambaareynayo Madaxweynaha France Ayaa Ka Dhacay Magalada…
Dowladnimo iyo Qabiil isma galayaan '' Mujaahid Ibraahin Dhagaweyne
Dukaamada Hubka Ee Mareykanka Oo La Faaruqiyey